Om Sakthi Dhanam House kuMgangatho ophantsi - I-Airbnb
Om Sakthi Dhanam House kuMgangatho ophantsi
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguVisalam
Le yiyunithi yomgangatho ophantsi enegumbi lokulala eli-1, amagumbi okuhlambela ayi-2, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala. Kukho izixhobo ezisisiseko kunye nesitovu sokwazisa esibonelelweyo. Iibhedi ezi-4 ezongezelelweyo ziyafumaneka ngeendleko ezongezelelweyo, eziya kuhlawulwa ngondwendwe ngalunye. Ezi bhedi zinokubekwa kwigumbi lokuhlala eliphangaleleyo. I-Base Price ye-2 iindwendwe (+ abantwana), ukusebenzisa i-queen bed kwigumbi lokulala. Iyunithi yayo eyahlukileyo enomnyango wabucala kuyo yomibini imigangatho kunye neyokupaka imoto enye ecaleni kwesango. Ukwahlula iiyunithi zeA/C kuwo onke amagumbi.
Le yiyunithi yomgangatho ophantsi enegumbi lokulala eli-1, amagumbi okuhlambela ayi-2, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala. Kukho izixhobo ezisisiseko kunye nesitovu sokwazisa esibonelelweyo. Iibhedi ezi-4 ezongezelelweyo ziyafumaneka ngeendleko ezongezelelweyo, eziya kuhlawulwa ngondwendwe ngalunye. Ezi bhedi zinokubekwa kwigumbi lokuhlala eliphangaleleyo. Ukuba ufuna amagumbi okulala ama-2, sinolunye uluhlu "Indlu ye-Om Sakthi Dhanam/Igumbi lokulala elinye". Uyakwazi ukubhukisha zombini ezi zintlu kunye ukuba ikhona imihla yakho.
I-Kanagasabai Nagar yindawo yokuhlala ehloniphekileyo, ekhuselekileyo kwaye ezolileyo, enokufikelela ngokulula kuzo zonke iindlela eziphambili, iTempile yaseNataraja, iBus-stand kunye nokuthenga.
Naziphi na iimfuno ezingxamisekileyo ngexesha lokuhlala kwakho ziya kuphendulwa/zibonelelwe ngabaqeshi bethu abahlala kumgangatho wokuqala. Ndiyafumaneka ukuba ndithathe umnxeba wakho nangaliphi na ixesha ngaphambi / ngexesha nasemva kokuhlala kwakho ukuze ndiphendule nayiphi na imibuzo / iinkxalabo onokuba nazo.
Naziphi na iimfuno ezingxamisekileyo ngexesha lokuhlala kwakho ziya kuphendulwa/zibonelelwe ngabaqeshi bethu abahlala kumgangatho wokuqala. Ndiyafumaneka ukuba ndithathe umnxeba wa…